Izici Zokucinga Isikhundla Ukuhlangana 2013 | Martech Zone
Izici Zokucinga Izinga Lokuhlangana 2013
NgoLwesine, Juni 27, 2013 NgoLwesine, Juni 27, 2013 Douglas Karr
DK New Media usanda kungena ngemvume nge Izindlela zokucinga futhi manje sithuthukisa indawo yabo njengenhlangano ephethwe lapha Martech Zone. Isizathu esiyinhloko ukuthi bangabanye babambalwa Amathuluzi we-SEO lokho kugxile ekugxileni kakhulu ekuthintekeni komphakathi nasezingeni njengamanye amaphuzu wendabuko we-SEO.
Ngabe amakhasi ewebhu abekwe kahle yi-Google afana ngani futhi yini ewahlukanisa namakhasi asezingeni eliphansi? Ama-searchmetrics ahlole ama-URL angama-300,000 avela ezindaweni eziphezulu zomphumela wokusesha ngobukhona nobukhulu bezakhiwo ezithile. Imiphumela ikhonjiswa maqondana nokuthi lezi zakhiwo (izici) zihlangana kanjani namazinga weGoogle (kusetshenziswa Umlingani wokulingana kwesigaba sika Spearman).
Lo mbiko ubanzi futhi awuyimele kabi idatha (ukubangela ukuqhathanisa nokulungiswa) njengoba izinkampani eziningi zokwenza izinjini zokucinga zisebenza kahle. Ukuthatha okusemqoka kithina umthelela wezindlela ezijwayelekile zokusesha ezihlangene nokwabelana komphakathi…. Hewu!
Izinsizakalo ze-MOS SEO
Jul 12, 2013 ku-5: 10 AM
I-infographic enhle. Izimpawu zomphakathi kanye nokugunyazwa kweGoogle nakho kuyizinto ezibaluleke kakhulu ekutholeni isikhundla esihle ku-SERP.